Global Voices teny Malagasy » 300: Mihoatra Noho Ny Sarimihetsika Ho An’ny Iraniana Maro · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Septambra 2017 6:16 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika (fr) i Pascale Doresca, Arimalala
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fifindràmonina, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Tantara, Toekarena sy Fandraharahàna
Sariitatra nataon'i Afshin Sabouki  an'ny tetikasa 300, valinteny ara-javakanto ho an'ny 300, ilay sarimihetsika.
Nahangona vola be ny sarimihetsika “300”, mifototra amin'ny boky noravahan'i Frank Miller , ary lohahevitra nangotraka tany anatin'ny gazety Iraniana, lehibe sy kely. Ao anatin'ilay sarimihetsik'i Zack Snyder, Spartes niisa 1.300 no niady hatramin'ny farny nanohitra ny mpanjaka Persiana Xerxès sy ireo miaramila iray tapitrisa nentiny.
Iraniana maro no tafintohina tamin'ilay sarimihetsika. Araka ny gazety mpiseho isan'andro Ayande No, fikasan'ilay sarimihetsika ny hiteny amin'ny vahoaka hoe i Iran, izay ivon'ny ratsy ankehitriny, no loharanon'ny faharatsiana hatramin'ny ela ary ny razamben'ny Iraniana maoderina dia ireo olondia ratsy mpamono olona sy tsy misy dikany hitanao ao anatin'ny “300” . “Warner Brothers, mpamokatra ilay sarimihetsika, dia nanazava haingana fa “asa noforonin'ny saina, azo lazaina hoe miorina no sady tsy miorina aminà tranga ara-tantara” ilay horonantsary.
Samy hafa ny fihetsik'ireo Iraniana bilaogera niresaka momba ilay sarimihetsika.
Hatezerana sy Fanantenana
Namorona “baomba Google ” antsoina hoe “Tetikasa 300” (“ilay sarimihetsika 300″) i Lego Fish mba hitarika ireo olona izay mikaroka torohay momba ilay sarimihetsika ho any aminà tranonkala misy ny asan'ireo mpanakanto nampiasa ny lohahevitra ‘Persa fahiny’. Hoy ilay bilaogera “Ankafizo ny fotoana ary aelezo ny hafatra [fa tsy araka izay ilazàna azy ao anatin'ilay sarimihetsika akory ny Iraniana]”.
Hazavain'ilay bilaogera fa, na inona na inona eritreretin'ny sasany, tsy resaka valifaty na fanoherana ilay Tetikasa 300. Ezaka ho fiarahamiasa mikendry ny hampiseho ny lafiny ara-javakanton’ ireo Persa izay tsy hita matetika any anatin'ny haino aman-jery izy io, indrindra amin'izao androntsika izao.
Manome fijery ara-tantara “amin'ny fiarahamonina Sparta manontolo” ny The Spirit of Man ; manambara fa “vondrom-piarahamonina tsotra sy aristaokraty mihoatra ny 20 taona talohan'ny namoronana ilay fomba filàza azy ny Sparta.” Nampiany fa “ny sarimihetsika 300 dia tsy ho eo amin'ny lisitr'ireo sarimihetsika maloto izay tiako handaniana ny volako ary andrisihako ny hafa tsy handany ny volany izay sarotra ny nahazoany azy amin'ity sarimihetsika ity.”
Lazain'i Mohammad Ali Abtahi fa noforonin'i Hollywood ilay sarimihetsika mba hanalàna baraka ny tantaran'i Iràna. Nampiany hoe mety ho fanehoankevitra amin'ny fanamafisan'ireo mpitarika Iraniana, toy ilay kabarin'i Ahmadinejad manohitra ny Fandringanana Faobe (Holocauast). Hoy i Abtahi manampy, “fa ity sarimihetsika ity dia tsy afaka hisy fiantraikany amin'ny olona ao amin'ny tontolo izay mahalala ny tantara .” [Fa]”
Maniry hahita zava-marina kokoa any anatin'ireo sarimihetsika i Kourosh Ziabari :
Te-hanontany fotsiny aho izay mety hitranga raha tsy nanandrana nanala ireo zava-marina ara-tantara ary tsy nifidy izay tiany tany anatin'ireo pejin'ny tantara ireo mpanatontosa, mpamokatra, mpanoratra ary mpanakanto? Te-hanontany aho izay mety no hitranga raha nampiseho izay tena sary marina sy azo antoky ny ady tany Thermoplaye nivanaovan'i Persa sy Gresy ilay sarimihetsika 300?
Fihotakotahana maro amin'ny tsy misy dikany
Milaza i Parsanevesht  [Fa] fa manome endrika ratsy an'ireo Iraniana ilay sarimihetsika fa tsy manompa. Manontany ny antony isehoan-tsika ho be fihetseham-po, manaiky ny hoe ahoana afaka nalefa ilay baomba Google ary ny fanangonan-tsonia napetraka telo andro mialoha ny nahatongavan'ilay sarimihetsika tany amin'ireo trano fandefasana sarimihetsika?
Nanoratra toy izao i Pouya , izay nahita ilay sarimihetsika :
Azoko ny antony mahatonga ny Iraniana marobe ho tezitra aminy [ilay horonan-tsary]. Mpanavakavaka ilay sarimihetsika ary manimba ny tantara Iraniana amin'ny fanehoana an'i Iràna fahiny ho toy ny fanjakan'ny mpamoritra, mpanavakavaka ny maha-lahy sy maha-vavy, andevo, ary mpandroba. Na izany aza, dia fanehoana noforonin'ny saina momba ny tranga iray ara-tantara io.
Aiza ny tena zava-misy ao anatin'izany rehetra izany?
Manontany tena ny Iranian Truth  raha mety hafantoka any an-kafa ireo fanoherana naterak'ilay sarimihetsika :
Tena mandiso fanantenana ny mahita Iraniana marobe maneho hevitra momba ity sarimihetsika ity rehefa misy olana maro lehibe kokoa sy faran'izay goavana tokony ho raisina, ohatra, ny mety ho ady amin'i Iràna izay mety hiteraka fahafatesan'olona an'arivony maro, ny fakàna an-keriny ireo vehivavy mafàna fo ao Iràna, ary ny tsy fitsaharan'ny tsy fanajana ny zon'olombelona ao Iràna sy Etazonia.
Manohy ilay bilaogera mba hanaovany fampitahàna mahaliana amin'ireo fanangonan-tsonia samy hafa nosoniavin'ireo Iraniana:
Olona 293 monja no nanao fanangonan-tsonia ho an'ny fanafahana ireo gadra politika tany Iràna. Olona 4.083 no nanao fanangonan-tsonia ho an'ny fanafahana ireo vevivavy mpikatroka izay tsy ela akory izao no nogadraina ao Iràna. Olona 5.108 no nanao hetsi-panoherana hanafahana an'i Ahmed Bateby any am-ponja,amin'ny fampijaliana ary amin'ny fahafatesana, nefa mazava ho azy 6.153 no niahiahy hoe manala baraka ny hambom-pon-dry zareo Iraniàna ny sarimihetsika iray mifototra aminà boky iray voaravaka sary.
Ambaran'i Majid Zohari  [Fa] fa ny fanajàn'i Gresy an'i Persa fahiny dia lehibe kokoa noho ny fanajàn'ny Repoblika Silamo ny tantara Iraniàna. Mampanontany tena ilay mpitoraka bilaogy ny hoe iza no tena manala baraka bebe kokoa ny hambompom-pirenena Iraniana .
Aiza ireo Iraniana Mpampiasa vola ?
Asehon'i Azarmehr  hoe tahaka ny ahoana fomba fanirian'ny tale iray hanatontosa sarimihetsika momba ny tantara Iraniana nefa tsy afaka nahazo fanohanana avy amin'ireo mpampiasa vola ao an-toerana.
Taona vitsivitsy lasa izay, dia naniry hanao sarimihetsika iray momba an'i Cyrus le Grand  ny tale tanora iray antsoina hoe Alexandre Jovy. Ny sasany amin'ireo Iraniana mpamaky ahy dia mety hahatsiaro fa nanadihady an'i Alexandre tao amin'ny fahitalavitra Azadi aho, teny ivelan'ny trano fitehirizam-bakoka Britanika any Londona. Novinavinaina ho 50 tapitrisa Livres ny tetibola ho an'ny sarimihetsika Cyrus. Samy nanome 20 tapitrisa Livres ho an'ny fanatontosana ny sarimihetsika ireo roa tsy Iraniana fa samy mpampiasa vola. Te-hampiseho ny fanahin'ny fandeferana sy ny fahalehibeazan'i Cyrus ireo mpandraharaha roa ireo. Tontosa ilay sarimihetsika, tokony ho loharanonà rehareha ho antsika rehetra izany. Na izany aza, tsy nisy Iraniana mpampiasa vola, na iray aza, nanolotra ny vola 10 tapitrisa Livres!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/09/21/106356/
 Afshin Sabouki: http://sabouki.blogspot.com/
 Frank Miller: http://moebiusgraphics.com/
 fikasan'ilay sarimihetsika ny hiteny amin'ny vahoaka hoe i Iran, izay ivon'ny ratsy ankehitriny, no loharanon'ny faharatsiana hatramin'ny ela ary ny razamben'ny Iraniana maoderina dia ireo olondia ratsy mpamono olona sy tsy misy dikany hitanao ao anatin'ny “300”: http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/6446183.stm
 baomba Google: http://en.wikipedia.org/wiki/Google_bomb
 The Spirit of Man: http://thespiritofman.blogspot.com/2007/03/300.html
 fa ity sarimihetsika ity dia tsy afaka hisy fiantraikany amin'ny olona ao amin'ny tontolo izay mahalala ny tantara: http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146308601
 Kourosh Ziabari: http://cyberfaith.blogspot.com/2007/03/300-truth-2.html
 Iranian Truth: http://www.iraniantruth.com/?p=911
 Majid Zohari: http://www.majidzohari.com/2007/03/300_14.html
 Cyrus le Grand: http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_the_great